Isifundo ngo James James Ranisi Jolobe kwiDyunivesithi YaseNtshona Koloni #SibuyiselaIsidimaSoLwimiLwesiXhosa - Vernac News
Educational Opinions & Analysis
October 10, 2018 May 2, 2020 Vernac News
Gqr. Sebolelo Mokapela
Namhlanje kwiYunivesithi yaseNtshona Koloni bekubanjwe umsitho wokuqala ofundisa ngoomakhwekhwetha boncwadi lwesiXhosa. Isifundo sokuqala sihlohlwe nguMyezo Litha Jolobe ongumzukulu wongasekhoyo uJJR Jolobe. Ungazibukelela apha esi sifundo. uGqirha Sebolelo Mokapela ubhale ngokubaluleka kokufunda ngabavulindlela.
Nangona uMgaqo-siseko welizwe, owapasiswa ngowe-1996 wathi wavakalisa ukuba zonke iilwimi, zoMzantsi Afrika kwaneenkcubeko zazo zizakunikelw’ ingqalelo, zinikwe iwonga nendawo kwisizwe ngokubanzi kwaye zibe kumgangatho omnye nezi lwimi ezazikade zithathelwe phezulu ezifana nesiNgesi ne-Afrikaans, kodwa oko akukenzeki nanamhla oku.
Abantu beelwimi zabaNtsundu ikakhulu, basajongelwe phantsi nanamhlanje nto leyo ekhokelele ekubeni nabo bazijongele phantsi. Kutheni ndisithi bazijongele phantsi nabo ngokunokwabo, uyazibuza? Jonga indlela esizibukula ngayo izinto ezidibene nesiXhosa (nabezinye iintlanga bakwanjalo). Umzekelo, asifuni kuviwa sithetha ulwimi lwethu, asifuni kubonwa sisitya ukudla kwethu kwesiNtu, asifuni kubonwa sinxibe isinxibo sethu sakwaNtu, asifuni kwaziwa ukuba siyawenza amasiko ethu kwanokuba singabantu abazingcayo ngomnombo wethu othi usenze sahluke kwezinye izizwe nezizwana.
SiliSebe lesiXhosa kwiYunivesithi yeNtshona Koloni, sikuqaphele oko kwasikhubekisa, kwasitsarha, kwasibinda, kwasenza saba nesazela. Kungoko ke sibone kufanelekile ukuba siphakame, sibhinqele phezulu silungise indlu yethu, singathi “hayi, mayisele isoyela seyoyele kakade.”
Sithi ayikoyeli kwaye ayisayi koyela sikho nje. NjengaSinala ke, gxebe iZiko leMfundo, sibone ukuba ayikho enye indlela ngaphandle kokusebenzisa ezi zifundo sibahlohla zona abafundi ukubalandela umnombo wabo, kuba kakade kuthiwa umntu kunzima ukuba aye phambili engayazi imvelaphi yakhe; zazi ukuba usukaphi na ukuze wazi ukuba uya njani na phambili.
Esi sifundo ke siphathelelene nooVulindlela boncwadi lwesiXhosa, ncwadi olo olutyebileyo ngemvelaphi yomnt’ oNtsundu, ngokukodwa owakwaXhosa, kule imeko. Asizithengi iincwadi ezibhalwe ngesiXhosa sikhetha ezesiNgesi, asinamdla kuncwadi lwesiXhosa kangangokuba nabo basifundayo ezikolweni naseSinaleni bakwenza oko kuba befuna isatifikethi kungekuko ukuba baqhutywa luthando lolwimi. Abafundi besiXhosa eUWC ngabafundi abawutsala ezingcanjini umnombo wolwimi lwesiXhosa kwanenkcubeko yakwaXhosa nokuba bona bachaphazelaka njani na kwanokuba yintoni abafanele ukuba bayenze ukuze eli lifa sele balixongxelwa balakhelwa belilungiselwa ngaba Vulindlela bethu lingatshabalali kuloko liqhubele phambili.
Abafundi besiXhosa, eUWC, ngabafundi abazingcayo ngobuXhosa kwanangesiXhosa sabo, abafundi abahlala benolangazelelo lokufumana nokufunda banzi ngomnombo wesiXhosa, abafundi abafuna ukuba negalelo ekubuyiseleni isidima solwimi lwesiXhosa kwanakumzi kaXhosa ngokubanzi.
Eli phulo le lizama ukufezekisa loo njongo kwanaloo mnqweno. Esi ibisisifundo sokuqala kwezininzi ezizakulandela unyaka nonyaka eUWC.
#Sibuyal’eMbo; #SibuyiselaIsidimaSoLwimiLwesiXhosa #SibuyiselaIsidimaSomzioNtsundu
Tagged JJR Jolobe, Sebolelo Mokapela, UWC